Siilaanyo oo booqasho ku tagey magalaada Laascaano
LAASCAANO- Madaxweynaha Somaliland ayaa booqasho ku tagey magaalada Laascaano xarunta gobolka Sool halkasoo si diiran loogu soo dhoweeyey.
Madaxda maamulka gobolka iyo bulshada qaybaheeda kale duwan ayaa ku soo dhoweyeey waftiga Madaxweynaha Somaliland dueleedka Laaacaano.
Axmad Silanayo ayaa dhagax dhigey Ari Cadeeye oo 30KM u jira Laaacaano wado dhererkeedu yahay 80km taasoo isku xireysa degmada Xudun iyo degaankaas, isagoo sheegey in booqashadiisu diirada saareyso inuu la socdo xaalada gobolka.
Booqashada Siilaanyo ee gobolka ayaa ku soo beegmeysa maalmo kadib markii isku shaandheyn uu sameeyey xilal ugu magacaabey xubno ka soo jeeda gobolka Sool.
Xilalkaan loogu roonaadey gobolka Sool ayaa waxaa ugu muhiimsanaa Wasiirka Arimaha gudaha Iyo Amniga oo loo magacaabey shaqsi kasoo jeeda gobolka Sool.
Gobolka Sool ayaa waxaa magaalo madaxdiisa iyo degaanada ku xeeran ka arimiya maamulka Somaliland kasoo maamulka Puntland ka qabsatey 2007.
Xukuumada Madaxwyne Siilaanyo oo ku jirta diyaargarowga doorashada ayaa dadaal ugu jirta sidii dadweynaha gobolkaas uga qayb gali lahaayeen diwaangalinta kuwasoo xisbiyada maamulkaas u kala tartamayaan.
​Ganacsade lagu dilay magaalada Laascaano
Soomaliya 01.09.2016. 23:01
LAASCAANO, Somalia- Koox ku hubaysnaa Bastoolado ayaa caawa magaalada Laascaano xarunta gobolka Sool ku weeraray niman ganacsato ah, waxaana geeriyooda mid kamid ah sida ay noo xaqiijiyeen goob joogayaal ku sugnaa degmada.
Weerarka oo dhacay salaaddi cishaha k ...
​Rabshado dhimasho sababay oo ka dhacay Laascaano
Soomaliya 04.09.2016. 14:16
​Puntland oo ka hadashay shaqaaqo ka dhacday Laascaano [Dhagayso]
Puntland 18.05.2016. 18:55
Madaxweynaha Puntland oo lacag ku bixiyey arimaha gobolka Sool, xildhibaano saluugey
Puntland 21.08.2016. 03:18
Madaxweyne Xasan Shiikh oo ku soo wajahan Puntland
Soomaliya 20.08.2016. 13:53
Somaliland: Diwaangalin ka bilaabatey gobolka Awdal
Somaliland 13.02.2016. 07:09